Fanadinana bakalorea teknika :: Takin’ireo mpampianatra ihany koa ny hisian’ny fihodinana faharoa • AoRaha
Fanadinana bakalorea teknika Takin’ireo mpampianatra ihany koa ny hisian’ny fihodinana faharoa
Fitakiana. Manao antso avo amin’ny tokony hanaovan’ny mpiadina ao amin’ny sokajy teknika fihodinana faharoa ireo mpampianatra mivondrona ao amin’ny sendikan’ ny mpampianatra ao amin’ny fampianarana teknika sy arak’asa eto Madagasikara na ny SMFTEKAM. Ny fampito­vian-jo eo amin’ireo samy mpianatra niatrika ny Bakalôrea nefa voakorontana nandritra an’ireny disadisa fivoahan’ny laza adina ireny no anton’ny anaovan’izy ireo fitakiana.
“ Tokony hisy ny fihodinana faharoa manokana ho an’ireo mpianatra ao amin’ny sokajy teknika. Niaina tamin’ ny fitaintainana sy fanahiana be ihany koa izy ireo.
Nisy tamin’izy ireo no tao anatin’ireny efitrano fanaovana fanadinana nisy korontana ireny. Niaraha-nahalala ihany koa ny fifandi­soan’ny laza adina ho an’ny foibem-panadinana sasany. Ny Filoha rahateo efa niteny fa hisy io fihodinana faharoa io ”, hoy Rakotomalala Aimé Rolland, filohan’ny sendika nandritra ny fanombohan’ny fitsarana ny taratasim-pana­dinan’ireo mpiadina ao amin’ny sokajy teknika, teny Ankatso, omaly.
Nihemotra noho io fiandrasana ny valin’ny fangatahana io ny fitsarana ny tara­tasin’ ireo mpiadina, izay tokony ho nanomboka omaly ma­raina. Tsy mbola nanomboka ny fitsarana mihitsy anefa ireo mpampianatra ireo tamin’ io andro voalohany io. Nanamafy mihitsy aza izy ireo fa mbola miandry valin-teny avy amin’ny minisitera vao hanatanteraka an’izany.
“Rahampitso ( ndlr: anio) amin’ny fito ora sy sasany maraina vao hivory indray izahay handinika an’izay tokony hatao. Tsy maintsy hanao ny fitsarana ihany saingy mbola miandry ny valin-teny mahafa-po avy amin’ ny minisiteran’ny Fampianarana ambony, izay niantefan’ny fangatahanay voalohany”, hoy ny fanampim-panazavan-dRakotomalala Aimé Rolland.
“Mbola hivory izahay izao”, hoy ny fanazavan’ny talen’ny fampianarana ambony ao amin’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony raha nanontaniana mikasika an’ izany. Ity farany izay voa­la­zan’ny sendika fa anisan’ireo nitsidika teny an-toerana ka niantefan’ny fangatahana mivantana.
Manodidina ny dimy arivo ireo mpiadina Bakalôrea sokajy teknika voasoratra anarana teto Antananarivo. Tsiahivina fa amin’ny sabotsy ho avy izao no vinavinaina hamoahana ny voka-panadinana Bakalôrea fihodinana voalohany.
Boriborintany faharoa :: Hamerina ny hasin’ireo vakoka ny kandidà Andriantsitohaina Naina
Fanondranana olona an-tsokosoko :: Hiara-hikaroka ireo Sinoa dimy voampanga ny PAC sy ny Masoivohon’i Shina